गणतन्त्रको सङ्घीयता भन्दा राजाले बनाएको ५ विकाश क्षेत्र धेरै वैज्ञानिक र न्यायमूलक – Rapti Khabar
जातीय क्लस्टर ऊबेलाको विभाजनको आधार थिएन पक्कै । र पनि सकेसम्म त्यो बिथोलिएको रहेनछ । पूर्वाञ्चलमा किराँत, मध्यमाञ्चलमा तामाङ-नेवार-मधेसी, पश्चिमाञ्चलमा गुरुङ, मध्यपश्चिममा मगर र थारू अनि सुदूरपश्चिममा खसहरूको जातीय क्लस्टर बाक्लै देखिन्छ । पुनर्वास कम्पनी नै रहेछ जसले पहाड़बाट झर्न चाहने र भूमिहीन समुदायलाई तराईमा जग्गा वितरण गर्दो रहेछ ।
तराईका सँग जग्गा खोसेर पहाड़ेलाई बाँडिएको प्रचार गरिए पनि वस्तुस्थिति त्यो रहेनछ । झापाको लिम्बू र प्रसाईं होस् या चितवनको पौडेल र श्रेष्ठ, औलो लाग्ने निर्जन खोरिया फाँडेर बस्ती विकासमा लागेका रहेछन् । त्यसको काम खोस्ने नभएर दिने रहेछ । अहिले त दिइने जति हुनेखानेले नै पाउँछन्, पक्कै त्यो बेला कसैले बढ़ी र कसैले घटी पाए होलान् । तर मेरा हजुरबुबाहरू खोरिया फाँड्न नसकेर पहाड़ नै फर्किएको सम्झना सुनाउनुहुन्छ ।
आगो मान्छेको दैनिक जीवनमा नभई नहुने चीज हो । कल्पना गर्नुस् त आगो बिनाको संसार कस्तो होला ? आगो बिना न खाना पाक्छ न त जाडोमा जीउ न्यानो नै पार्न सकिन्छ ? तपाईं भन्नुहोला आगो नभए पनि बिजुलीबाट हिटर बालेर सबथोक गर्न सकिन्छ । तर बिजुलीले दिने ताप त सामान्य आगोको बिस्तारित रुप न हो […]
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) असोज महिनामा सन्तानबाट सुख मिल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएको कामको गाँठो फुक्नेछ । नयाँ कार्य व्यवसायको थलनीका लागि महिना उत्तम रहनेछ । भू–धनबाट लाभ हुनुका साथै बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुने देखिन्छ । अरूको मुख नताकी सही निर्णय लिन सके थप अवसर प्राप्त होला […]